Yaya Toure oo shaaciyay riyadiisa kooxda City | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Yaya Toure oo shaaciyay riyadiisa kooxda City
Yaya Toure oo shaaciyay riyadiisa kooxda City
London (Radiohimilo) – Xidigga reer Ivory Coast, Yahya Toure ayaa u furan inuu heshiiskiisa joogitaan ee gegida Etihad inuu ballaariyo marka xagaaga xiga uu idlaado kadib markii uu dib u hagaajiyay xiriirka wada-shaqeyn ee kala dhaxeeya tababarihiisa Guardiola.
City ayaase u muuqata midaan hubin inay u baahan tahay heshiis laacibkan oo toddobaadkiiba ku kaca 230,000 oo Gini – xilli uu 34-jirsanayo.
City ayaa guuleysatay dhamaan shantii kulan ee danbe oo uu Toure ciyaaray isaga oo u badan inuu sii ciyaaro maadama Ilkay Gundogan la filayo inuu lumiyo ciyaaraha soo socda – dhaawac anqawga ah dartiis.
Toure ayaa laga fahmay inuusan ku degdeg saneyn dib u xalinta mustaqbalkiisa – in kasta oo fara-gelinta afhayeenkiisa ay wali caqabad ku tahay wada-hadalka heshiis kasta.
Hayeeshe, horumar ayaa laga dareemay xiriirka kala dhaxeeya Pep Guardiola kadib guushii ay ka gaareen Arsenal toddobaadkan.
“Markii aan imaanayay City waxaan la imid hadaf ah inaan taariikhdeeda wax ku kordhiyo,” ayuu yiri Toure. “Waxaan rabaa in City ay ka awood badnaato United: waana ogahay waxay qaadan dadaal adag; balse waa riyadayda.”
“Waxaan rabaa inan sameeyo wax muhiimad u leh kooxdayda: horay waxaan ula qaaday laba koob oo PL: waxaana rabaa guulo ka dheer kuwaas.”
“Aad ayaan uga xumahay dhaawaca ku dhacay Ilkay Gundogan.”
“Waxay ila tahay inaan waligayba ahaa tiir adag; hubaashiina waxaan ahay ciyaaryahan City ay leedahay.”
Previous: Shisheeyaha guursanaya Sucuudiyaanka oo laga rabo inay maraan tijaabo adag oo caafimaad
Next: Lukaku oo adduun lacageedkii ugu badnaa Everton ka qaadanaya kadib gelista heshiis cusub